Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka ONLF oo Ka hortagay Ciidamo Ethiopian ah oo Xasuuq kageysan rabay Madheedh oo ka tirsan Awaare iyo goobo kale.
Ciidanka ONLF oo Ka hortagay Ciidamo Ethiopian ah oo Xasuuq kageysan rabay Madheedh oo ka tirsan Awaare iyo goobo kale.
ONLF oo kudishay weerar 13 Askari oo Ethiopian ah.
21/02/2012 Ciidanka Jabhadda Wadddaniga Xoraynta Ogaadeeniya ayaa weerar uu ku qaaday ciidanka cadawga oo ku sugnaa Madheedh oo ka tirsan degmada Aware . Waxayna kaga dileen 13 askari halka dhaawac badana ay soo gaadhsiiyeen , ciidankan oo ahaa mid u socday hawlgal ay ku dhibaataynayaan shacbiga ayaa hadhaagiisii dib loogu soo celiyay deegaankii uu ka baxay ee magaalada Awaare
Isla taariikhdan fal gaadmo ah oo ciidanka lagaga fuliyay tuulada Dusmo ayaa inta la hubo waxaa lagaga dhaawacay hal askari.
Sidoo kale fal gaadmo ah oo ka dhacay Balli –dhabiile oo ka tirsan garrbo 19/2/12 ayaa waxaa ciidanka cadawga lagaga dhaawacay 2 askari.
Dhinaca kale kamiin ay u galeen ciidanka jabhaddu kolanyo gaadiid ah oo maraysay wadada isku xidha tuulada Dig iyo degmada Gunadago ayaa waxaa halkaa loogu gaystay gaadiidkii ay wateen khasaare balaadhan, waxaana lagu naafeeeyay laba baabuur iyadoo wixii saarnaa ay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay, waxayna ka jiiteen baabuurtaasi goobtii.
Waxaa kale oo jira dagaalo kale oo ka dhacay goobo kale kuwaas oo aan dib idiinka soo gudbin doono
Waxaa wali halkiisii kasii soconaya dilkii arxandarada ahaa ee ka dhacay deegaanka gunagado ,halkaas oo lagu xasuuqay 14/2/12 dad badan , hadaba dilalkii ugu danbeeyay oo dhacay 25/2/12 ,ayaa waxaa nasoo gaadhay magacyada dadkii la laayay qaar ka mid ah oo aan idiin soo gudbin doono.
Lasoco Wararka ONA